७ किसिमको हुन्छन् यौ’न साथी, तपाईका साथी कस्ता ? - PARIJATMEDIA
यौ-नका बिभिन्न तौर तरिका, विधी हुन्छन् । शारी’रिक तथा मान’सिक त’नाव हटाउने विधी पनि हो, यौ’न । यौ’न शा’रीरिक क्रि’या भएपनि यसमा भावना जोडिएको हुन्छ । त्यसैले यौ’न क्रि’या र त्यसबाट लिने सन्तु’ष्टि सबैमा एकरुपता हुँदैन ।यौ’न साथी एकैखाले हुँदैनन्, धेरै थरीका हुन्छन् । खासगरी पार्टनरको सोचाई, बुझाई आदिले यसमा खास भूमिका खेल्छ।
Prevश्रीमान’लाई दबाएरै राज गर्छन् यी राशीका महिला!
next“साम्राज्ञीलाई बैज्जत हुने डर किन ? यो भिडियो सार्बजनिक गर्दै युट्युब तथा मिडियामा अन्तर्वार्ता नदिने घोषणा”(भिडियो सहित)